Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » India na -ekpughe oke uto na ngalaba Drone
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • News • Tourism
N'ịzọ ọzọ iji mezuo ọhụụ mkpokọta nke Aatmanirbhar Bharat, Gọọmentị Etiti n'okpuru nduzi nke Prime Minista India Shri Narendra Modi, ewepụtala maapụ ikuku India maka arụmọrụ drone.
Ndozigharị amụma na mbara ikuku nke drone ga-eme ka uto dị oke mma na mpaghara drone na-abịanụ maka India.
Drones na -enye nnukwu uru maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ akụ na ụba niile.
Nyere ike ọdịnala ya na imepụta ihe ọhụrụ, teknụzụ ozi, injin na -eri nri yana nnukwu mkpa ụlọ ya, India nwere ike ịghọ ebe nchekwa ikuku ụwa site na 2030.
Maapụ ikuku ikuku nke drone na-abịa dị ka ntinye nke Iwu Drone nwere onwe, 2021 nke gọọmentị etiti wepụtara na Ọgọst 25, 2021, atụmatụ PLI maka drones ewepụtara na Septemba 15, 2021, na ntuziaka data Geospatial nyere na February 15, 2021. Ndozigharị iwu ndị a niile ga-eme ka ọ too oke nke ukwuu na mpaghara drone na-abịanụ.
GỊNỊ mere DRONES ji dị mkpa?
Drones na -enye uru dị ukwuu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara akụ na ụba niile. Ndị a gụnyere mana ejedebeghị na ọrụ ugbo, igwupụta ihe, akụrụngwa, nleba anya, nzaghachi mberede, njem, eserese obodo, nchekwa, na ndị mmanye iwu ịkpọ aha ole na ole. Drones nwere ike bụrụ ndị nrụpụta ọrụ na uto akụ na ụba n'ihi iru ha, ịdịmma ha, na ịdị mfe nke iji ya, ọkachasị na mpaghara India dịpụrụ adịpụ.
GỊNỊ KWESỊRỊ KWESỊRỊ IHE NTỤKWỌ AKA DRONE A?
N'ihi iwu ọhụrụ, atụmatụ drone PLI na maapụ ikuku ikuku nwere ike ịnweta, drones na ụlọ ọrụ na -emepụta ihe nwere ike ịhụ ntinye ego nke INR 5,000 crore n'ime afọ atọ na -esote. Mgbanwe ahịa kwa afọ nke ụlọ ọrụ na-emepụta drone nwere ike ito site na INR 60 crore na mpịakọta 2020-21 ruo ihe karịrị INR 900 crore na FY 2023-24. A na -atụ anya na ụlọ ọrụ na -emepụta drone ga -ewepụta ọrụ karịrị 10,000 n'ime afọ atọ na -abịanụ.
Industrylọ ọrụ drone, nke gụnyere arụmọrụ, eserese, onyunyo, ịgba agri, lọjistik, nyocha data, na mmepe ngwanrọ, ịkpọ aha ụfọdụ, ga-eto nke ukwuu. A na -atụ anya na ọ ga -eto ihe karịrị INR 30,000 crore n'ime afọ atọ na -abịa. A na -atụ anya na ụlọ ọrụ na -arụ ọrụ drone ga -ewepụta ọrụ karịrị 500,000 n'ime afọ atọ.
E nwere maapụ ikuku maka ịrụ ọrụ nke drone Igwe igwe igwe dijitalụ DGCA.
Ndị nnọchiteanya nọ na Madrid kpọrọ oku na UNWTO Bribery ...
Kirsten Baete nke Nebraska meriri aja ọcha nke ụmụ nwanyị...
Mgbazinye ezumike Hawaii adịlarịrị ugbu a
Njem gawa n'ihu n'ụbọchị mbụ: ọgụgụ isi mmadụ dị adị
Ụgbọ elu EgyptAir laghachiri na Cairo ka ha yisịrị egwu...
Tel Aviv na Dubai: ụgbọ elu ọhụrụ nke Emirates
Jamaica na -ahụ arịrịọ siri ike n'aka ndị njem US
Stephen Asiimwe ga-eduga ngalaba njem nlegharị anya nkeonwe Uganda
Kingston Jamaica ugbu a na ndepụta maka ezumike kacha elu nke 2022